‘छक्का पञ्जा ३’ मा स्वस्तिमाको ‘सप्राइज इन्ट्री’ ! « Ramailo छ
‘छक्का पञ्जा ३’ मा स्वस्तिमाको ‘सप्राइज इन्ट्री’ !
‘छक्का पञ्जा ३’ को छायाँकनबाट विभिन्न तवरका तस्बिरहरु बाहिरिने क्रम जारी छ । आइतबार कलाकार तथा निर्माता जितु नेपालले भने सप्राइजवाला तस्बिर आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरे ।
जितुले पोस्ट गरेको तस्बिरमा निर्देशक दिपाश्री निरौला, दिपकराज गिरी, किरण केसी, शिवहरी पौडेलको समुहमा नायिका स्वस्तिमा खड्का सप्राइज रुपमा देखा परेकी हुन् । तस्बिर अनुसार स्वस्तिमा पनि फिल्ममा आवद्ध छिन् । तर निर्माण पक्षले मुर्हतमा स्वस्तिमाको नाम सार्वजनिक गरेको थिएन । ‘छक्का पञ्जा ३’ समुहको तस्बिरमा अटाएकी स्वस्तिमाको फिल्ममा के कति भूमिका होला त ? दशैंमै स्वस्तिमा अभिनित ‘जय भोले’ रिलिज मिति तय गरेको छ ।
उसो त छक्का पञ्जा सिक्वेलकी बर्षा राउतले पनि पोखरामा पुगेर छायाँकन सकाएकी छन् । उनीसँगै प्रेमी संजोग कोइराला पनि यसपाली सुपरहिट सिरिजमा समावेश भएका छन् । नायिका प्रियंकको कार्कीको फिल्ममा विशेष भूमिका छ ।
‘छक्का पञ्जा ३’ की लिड हिरोइन दीपिका प्रसाईं हुन् । दीपिकासँगै दीपकराज, जितु, केदार घिमिरेको फिल्ममा मुख्य भूमिका छ । दशैंमा रिलिज गर्ने गरी फिल्मको छायाँकन भैरहेको छ ।